10 Izifundo eziningi ze-Scenic Golf EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izifundo eziningi ze-Scenic Golf EYurophu
10 Izifundo eziningi ze-Scenic Golf EYurophu
ngu Paulina Zhukov
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi
(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/08/2021)
Izigodi namagquma aluhlaza okotshani, izimfunda ezinkulu, ezindaweni ezinhle kakhulu eYurophu, lezi 10 izifundo ezinhle kakhulu zegalufu eYurophu, ngamanye amakilabhu egalofu aphezulu emhlabeni. Yonke inkambo yegalofu yenzelwe ukuphelela, inhlanganisela emangalisayo yezindawo nobuhle bemvelo.
Isithuthi somzila Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Gcina Isitimela, I Iwebhusayithi Amathikithi Eshibhile Emhlabeni.
1. IGolf Blue Green Pleneuf-Val-Andre EBrittany
Ngemibono emihle kakhulu ye- English Channel, Inkundla yegalofu iBluegreen Pleneuf Val Andre iyamangalisa. Inkundla yegalofu iBluegreen eBrittany ingenye yezinkundla ezibukeka kakhulu zegalufu eYurophu.
Inkambo eluhlaza eluhlaza ibuka ugu lwaseBreton, futhi ukuhlanganiswa komhlaba oluhlaza nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kuyamangalisa. Ngaphezu kwalokho, uzobe udlala kokukodwa kwe- 500 izifundo ezinhle kakhulu zegalufu emhlabeni.
2. Isifundo Esisha SaseScandinavia: Copenhagen
25 km ukusuka eCopenhagen, inkambo yegalufu elisha ibalwa ku 50 izifundo eziphezulu zegalufu eYurophu minyaka yonke. INew Course 36-hole ingenye yezinkundla ezibukeka kakhulu zegalufu eYurophu nge 25 amahektha ehlathi azungezile.
Imifudlana eholela emachibini emvelo, indawo enokuthula enokuthula, kanye neklabhu yegalufu enqoba imiklomelo, izokumangaza kusukela ekungeneni komgodi wokuqala. Izwe lihle impela futhi lihehe abagibeli begalufu abaningi abavela emhlabeni wonke.
IHamburg iya eCopenhagen Ngesitimela
I-Zurich iya eHamburg Ngesitimela
IHamburg iye eBerlin Ngesitimela
IRotterdam iya eHamburg Ngesitimela
3. Izixhumanisi zeCastletown Golf: Isle of Man
Umoya wasolwandle, izimbali zasendle, kanye nemibono ye-Isle of Man, ukudlala igalofu enkambweni yezixhumanisi zegalufu eCastletown kuyinto engalibaleki. I-Isle of Man ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eYurophu, kanti inkundla yegalofu ingenye yezinkundla ezibukeka kakhulu zegalufu eYurophu.
Uzungezwe ulwandle kubo bonke 3 izinhlangothi, njengoba udlala inkambo enhlonhlweni enhle yeLangness. Ugu olunamadwala lunwebeka ngamabhishi, ukushona kwelanga okukhazimulayo, I-Castletown Golf Links yesi-8 ezifundweni zegalufu ezihehayo e-UK nase-Ireland. Umgodi we-17 ubheke i- Ulwandle lwase-Ireland, kanye nombono ovela emgodini we-18, umlando waseSt. UMichaels Isle, 12isonto lekhulu leshumi, ukubukwa okungaphazamisa noma iyiphi i-golfer enolwazi.
4. ITralee Golf Club: Ireland
Hlela endaweni yemvelo, ebheke olwandle i-Atlantic nolwandle, Inkundla yegalufu iTralee e-Ireland ingesinye sezifundo zegalufu eziyingqayizivele kunazo zonke naseYurophu. Uzobe uxosha izimbobo ezintabeni eziluhlaza ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphambi kwakho.
Le nkundla ebukekayo enemigodi engu-18 ise County Kerry, ekhaya eDingle Peninsula, kanye neKillarney enhle esiqiwini. Inkundla yegalufu isethwe emaphethelweni we ugu emangalisa, nge-moorland eluhlaza kanye ne-iconic Southwest Ireland.
5. I-Golf Club Crans-Sur-Sierre: Switzerland
Eyodwa endala, nokho yesimanje futhi ifakwe, izifundo zegalufu eYurophu, inkambo yegalufu iCrans-sur-Sierre eSwitzerland ingenye yamaqembu amahle kakhulu egalufu eYurophu. Amachibi emvelo, izintaba, futhi isigodi esiluhlaza esiluhlaza saseSwitzerland siyizinto ezinhle neziqabulayo.
Le ndawo ehle kakhulu yegalufu eziNtabeni ZaseSwitzerland, ngakho ubuhle bendawo buhlaba umxhwele. Ngokubukwa kweMont Blanc neMatterhorn, izintaba eziphakeme kakhulu nezinhle kakhulu eYurophu, nakanjani uzomangala ngale nkambo yegalufu. Inkundla yegalofu iCrans-sur-Sierre iyi- uhambo oluhle lwesitimela kude Geneva, noBern.
I-Zurich eya eWengen Ngesitimela
IGeneva iya eWengen Ngesitimela
UBern waya eWengen Ngesitimela
I-Basel eya eWengen Ngesitimela
6. Inkundla Yegalofu Eningi Kunazo Zonke E-Ireland: Izixhumanisi ze-Old Head Golf
Uhlezi phezulu kwe-Old Head Kinsale, ezungezwe ulwandle, igalofu leKinsale linikeza ukubukwa okuhle, ukubukwa okuhle kakhulu kulo lonke elase-Ireland nase-UK.
Ngamadlelo aluhlaza, izindawo ezimangelengele, nokubukwa kolwandle, isimo sodumo sase-Ireland asipheli ukumangala. Ngakho, uzomangala ngamagceke amangalisayo e-Old Head Kinsale igalofu. Uzobe udlala igalofu ku- 350 idwala lamatshe amatshe amadala ayisigidi, ukuthuthela enyakatho ngokuhamba kwesikhathi. Le nkambo yegalufu emangalisayo isesifundeni saseCork, ngoseyili, ukudoba, ukuntweza emanzini, futhi abaningi imisebenzi yangaphandle kwabathanda amanzi kuleli chweba eliphephile.
7. Iningi leScienic Golf Course: IPassier Golf Club Meran South Tyrol
Ukubukwa kwePanoramic kwezintaba ezinhle kakhulu eYurophu, I-Passier golf club eMeran inikeza okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kubadlali begalufu abaphambili. Ngaphezu kwalokho, namathafa weSouth Tyrol, amachibi, izindlu zangasese, namagquma aluhlaza, iklabhu yegalofu iPassier inendawo enhle nomklamo.
Ngaphezu kwalokho, indawo yegalufu 18 izimbobo zisakazeka endaweni enamathafa, namadlelo aluhlaza, ukuheha abadlali begalufu abavela kuwo wonke umhlaba ngempelasonto yegalofu, noma ukweqa isikhathi eside kwimvelo yaseTyrolian.
I-Trento iya eBolzano Ngesitimela
IMilan iya eBolzano Ngesitimela
IBologna iya eBolzano Ngesitimela
IVenice iya eBolzano Ngesitimela
8. Igalofu Eichenheim: Austria
Phakathi kwamahlathi amakhulu e-Alpine, ezindlini zamapulangwe nxazonke, nezimfunda, inkundla yegalofu i-Eichenheim ingenye yezinkundla zegalufu ezinhle kakhulu eYurophu. Umoya omusha we-alpine, iphunga lemvelo, nobukhazikhazi bemvelo bukhuthaze abadlali begalufu abahamba phambili emhlabeni. Inkundla yegalofu i-Eichenheim inayo 18 izimbobo, isabalale ngaphezu kokungaphezulu kwe- 6000 amamitha.
Le ndawo ebabazekayo yegalufu ingenye yamaqembu amahle kakhulu e-Austria, ngezinsiza ezisezingeni eliphezulu: i-sauna, amachibi angaphakathi nangaphandle ukuze uphumule ngemuva komqhudelwano omuhle wegalufu. Akukho okufana ne-alpine landscape kanye nezimo ezinhle kakhulu zokuzijwayeza ukuthanda kwakho.
ISalzburg iya eVienna Ngesitimela
EMunich iya eVienna Ngesitimela
I-Graz iya eVienna Ngesitimela
Prague eVienna Ngesitimela
9. Iqembu le-Gardagolf Country: Italy
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Inkambo yeGardagolf inayo 27 izimbobo, kwande 110 amahektha, esifundeni esihle seLombardy.
Le ndawo enhle yegalufu izungezwe amagquma aseValtenesi, ukuhlinzeka ngemibono ejabulisayo futhi ejabulisayo kubadlali begalufu abaphambili kakhulu nababucayi. Inkambo ebomvu iyinkambo enhle kunazo zonke eGardagolf, ngezimbali nemithi emide nxazonke.
I-Trento eya eLake Garda Peschiera Ngesitimela
IBolzano Bozen eLake Garda Peschiera Ngesitimela
I-Bologna eya eLake Garda Peschiera Ngesitimela
IVenice eLake Garda Peschiera Enesitimela
10. I-Andermatt Golf Course: Switzerland
Elinye igugu laseSwitzerland, inkundla yegalufa iAndermatt ivala eyethu 10 izifundo ezinhle kakhulu zegalufu ezisohlwini lwaseYurophu. Inkundla yegalufu iAndermatt isesigodini esihle saseSwitzerland. Izintaba zezintaba ziqabula isibhakabhaka, amagquma aluhlaza okotshani, kanye ne-landscape efana neposikhadi.
Indawo ihlaba umxhwele kakhulu, ukuthi ngisho nabadlali abagxile kakhulu bangaphazanyiswa yisigodi esihle sase-Ursern. Inkundla yegalofu iAndermatt yakhelwe kahle ukuba yingxenye yemvelo futhi i-eco-friendly. Uzobona imifudlana yamanzi nezimbali zezimbali ezifakwe ngokumangazayo ezinkundleni zegalufu. Bangu 18 izimbobo ongakhetha kuzo. Ngaphezu kwalokho, umoya onamandla wasentabeni ubeka inselelo ku-golfer onentshiseko, ukukhuphula umdlalo wabo.
I-Basel eya ku-Interlaken Ngesitimela
UBern waya ku-Interlaken Ngesitimela
ILucerne eya ku-Interlaken Ngesitimela
I-Zurich eya ku-Interlaken Ngesitimela
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo oluya kanye kokuya kulezi 10 izifundo ezinhle kakhulu zegalufu eYurophu ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu “1o Most Scenic Golf Courses In Europe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dzu< - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / ru ibe / fr noma / es nezilimi eziningi.
Ngingumbhali onentshisekelo, umuntu ohamba yedwa onolaka kanye ne-blogger. Ngikholwa ukuthi ulimi namazwi kungamathuluzi anamandla angakhuthaza futhi adale imihlaba emisha. Ngiyakuthanda ukuhamba futhi ngihlanganyele ohambweni lwami ngezindaba zami nabanye besifazane emhlabeni jikelele - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte
Indlela Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane EYurophu
Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Ungawenza Kanjani Ukuqeqeshwa Kwebhizinisi Ngokufanele
Business Travel ngu zemininingwane, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Kuhle Wineries EYurophu Futhi How To Get Kukhona
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izikhangibavakashi Europe
12 Amakamelo Okuphunyuka Ahamba Phambili Emhlabeni
12 Izindawo Ezipholile Kunazo Zonke EYurophu
10 Izindawo Eziphezulu Ezinezinkundla Zethenisi
10 Izindawo ezihamba phambili zeholide ezinezinkantolo ezinhle ze-Basketball
10 Izindawo Zokuvakasha Ezinga-Isizini Emhlabeni Wonke